MyanCare | ကလေးငယ်များနှင့် နို့အန်ခြင်း
ရင်သွေး x တယ်လီနော်ဈေး အထူးအစီအစဉ်
မြန်ကဲ x တယ်လီနော်ဈေး အထူးအစီအစဉ်
ပုံရိပ်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် ကြေငြာထိုးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်
အသည်း ၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း
by myatlynn | Aug 12, 2020 | ကလေးကျန်းမာရေး
Warning: preg_replace(): Unknown modifier 't' in /home/customer/www/myancare.org/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 473
နို့စို့ အရွယ်ကလေးငယ်အများစုဟာ နို့စို့ ပြီးတိုင်း ပမာဏနည်းနည်းစီပြန်အန်ထွက်တတ်ကြပါတယ်။ နို့ရည်ချိုးလဲခေါ်လေ့ရှိကြတယ်။ ကောင်းကောင်းထိုင်နိုင်တဲ့ ၆လ ၇လ အရွယ်လောက်မှာတော့သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
မိခင် နို့စို့ ချိန် ၊နို့ဘူးစို့ ချိန်တွေမှာ နို့နဲ့ အတူ လေတွေကိုပါ ကလေးတွေကမျိုချမိတတ်ပါတယ်။ နို့ဘူးစို့တဲ့ကလေးမှာဆိုရင်ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လေတွေက ဗိုက်ထဲကိုရောပါသွားပေမဲ့ လေရဲ့သဘောအရ အရည်တွေကြားထဲကနေအပေါ်ကိုပေါ့ ပြီးပြန်တက်လာပါတယ် အဲ့လိုပြန်တက်လာတဲ့လေတွေနဲ့ အတူ နို့ အချို့လဲပြန်ထွက်လာတာပါ။
ကလေးရဲ့ပါးစပ်အပြင် နှာခေါင်းထဲကလဲထွက်လာတာမျိုးရှိနိင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူကြီးတွေလိုပဲ နှာခေါင်းဟာ လည်ချောင်း၊အာခေါင်တို့နဲ့ တဆက်တည်းတည်ရှိနေလို့ပါ။
တချို့ကလေးငယ်တွေမှာတော့ နို့စို့ တဲ့ပမာဏများသွားတာကြောင့်လဲ အပေါ်ပြန်အန်ထွက်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒီအရွယ်ကလေးတွေမှာ ဝင်လာတဲ့အစာကိုခွင့်ပြုပေးပြီး အထဲကအစာတွေပြန်မထွက်အောင်တားပေးမယ့် အစာရေမျိုအောက်ပိုင်းနားမှာရှိတဲ့ကြွက်သားလေးတွေက အပြည့်အဝမဖွံဖြိုးသေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောင် ဘာတွေသိထားရမလဲ?
နို့ဘူးတိုက်တဲ့ကလေးကိုလည်း ပက်လက်အနေအထား၊ခွေခေါက်နေတဲ့အနေအထားတွေမဖြစ်စေပဲ အနည်းငယ်ထောင်မတ်တဲ့ အနေအထားလေးနဲ့ တိုက်ပေးပါ။ ဆူညံသံတွေများနေတာမျိုးအာရုံများစရာတွေရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာတတ်နိုင်ရင်နို့တိုက်တာကိုမလုပ်တာကောင်းပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အာရုံများစရာတွေတွေ့ရင်ကလေးတွေကနို့ နဲ့အတူ လေတွေကိုပိုများများမျိုချမိတတ်ကြလို့ ပါ။ တကယ်လို့ နို့ဘူးတိုက်ရတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်တဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
နို့သီးခေါင်းမှာပါတဲ့အပေါက်လေးတွေက ကလေးစို့ နိုင်တဲ့ပမာဏထက်နည်းနေခဲ့ရင်ကလေးလိုသလောက်နို့ကိုမစုပ်နိုင်ပဲလေတွေပိုများများဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် အန်တာပိုဖြစ်နို်င်တာပေါ့ ။ တကယ်လို့အပေါက်တွေသိပ်များပြီးကလေးစို့နိုင်တာထက်ပိုများများထွက်နေခဲ့ရင်လည်း နို့တွေလျှံကျတာ သီးတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာမို့ အသက်အလိုက်စနစ်တကျရွေးချယ်ပါ။
နို့စို့ နေရင်းကလေးနားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာလေထုတ်ပေးပါ။ ကလေးရဲ့ အဝတ်အစား Diaper စတာတွေကို ချောင်ချောင်ချိချိဖြစ်နေပါစေ။
နို့တိုက်ပြီးချိန်မှာကလေးကို အနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက် ထောင်မတ်တဲ့အနေအထားလေးနဲ့ ထားပေးပါ။ အရမ်းချော့မြူတာ၊ဝှေ့ယမ်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ ။ နို့တိုက်ပြီးပြီးချင်းဖြစ်နိုင်ရင်ကားမစီးစေတာပိုကောင်းပါတယ်။ ကလေးကိုတစ်ခါတည်းပမာဏအများကြီးတိုက်တာထက် အသင့်အတင့် နှင့် အကြိမ်ရေပိုများများတိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အိပ်နေစဉ်ပြန်အန်ထွက်လျှင် ဘေးတဘက်သို့ အသာအယာစောင်းပေးပါ။
ကလေးရဲ့ မေးစေ့လေးကို ကိုယ့်ပခုံးပေါ်မှာထားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ အသာအယာချီထားပါ။ ကလေး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အသက်ရှုနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါစေ။ ကလေးရဲ့ ကျောလေးကိုအသာအယာပွတ်ပေးခြင်း၊ ပုတ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါ။
ကလေးကိုယ်လုံးကို အပေါ်ကိုအနည်းငယ်ထပ်မြှင့်ပြီးချီလိုက်ပါ ။ ကလေးရဲ့ ရင်ခေါင်းနေရာလောက်က သင့်ပုခုံးပေါ်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ် ဒီပုံစံလေးကလည်း လေတွေထွက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ် ။ ကျောလေးကိုအသာအယာပွတ်ပေး၊ပုတ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။
ကလေးကိုထိုင်ရက်အနေအထားနဲ့ လဲလေထုတ်နိင်ပါတယ် ။ သင့်ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်နေပါစေ။ သင့်လက်တစ်ဘက်နဲ့ ကလေးရဲ့ မျက်နှာ မေးစေ့ တို့ကို ညင်ညင်သာသာထိန်းထားပေးပါ။
ကျန်လက်တစ်ဘက်နဲ့ ကျောလေးကို ပွတ်ပေး၊ပုတ်ပေးပါ။ နောက်တစ်ခုကမှောက်ရက်အိပ်တဲ့အနေအထားလေးနဲ့ ထုတ်ပေးတာပါ။ သင့်ပေါင်ပေါ်မှာ ကလေးကို မှောက်ရက်လေးအိပ်နေပါစေ။ ကလေးရဲ့ မျက်နှာ မေးစေ့လေးတွေကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ ညင်ညင်သာသာထိန်းထားပေးပါ။ ကျန်လက်တစ်ဘက်နဲ. ကျောလေးကို ပွတ်ပေး၊ပုတ်ပေးပါ ။
ဒီပုံစံတွေကို တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ လေထုတ်ပေးဖို့ ကြိုးစားလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်သေချာလေထုတ်ပေးပေမယ့် လေမတက်လာလျှင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ ။ ကလေးကို အနားပေးလိုက်ပါ။ အထဲမှာထွက်လာစရာလေတွေများများရှိမနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အန်တဲ့ပမာဏက အရင်အန်နေကျထက်ပိုများလာတယ် စို့လိုက်တဲ့နို့ပမာဏနီးပါးထိဖြစ်နေတယ်၊ အကြိမ်ပိုများလာမယ် ။
အန်ပြီးနောက်မှာ ကလေးကမအီမသာဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးရှိနေမယ် ။ အရှိန်နဲ့ အန်ထုတ်နေတာမျိုးဖြစ်မယ် ။ ဖျားတာ၊အီတာ၊ ဝမ်းပျက်တာ စတဲ့တခြားလက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့ ပါတွဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ သာမန်မဟုတ်ပဲ အခြားကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်အန်နေတာဖြစ်နိုင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
MultiVitamin, Mineral များနဲ့ အထင်လွဲမှားမှုများ
နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ခု
ကျန်းမာရေး အသိအမှား (၈)ချက်
Hepatitis E viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ E…
လူဖတ်များသော ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ
In Common Health Problems
Hepatitis E viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ E ပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
In Liver and Gastrointestinal
Hepatitis C viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
Hepatitis B viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
No. 21/ 5(D) Thiri Mingalar Yeik Thar St, Yankin Township, Yangon.
(+95) 979 8115 566
Branding and Advertising Program
Yin Thway Call Center
Copyright © 2021. All Rights reserved by MyanCare